Sidee ayey u muuqan doontaa shaxda Manchester United haddii lagu daro Kalidou Koulibaly? - Hargeele - Wararka Somali State
Sidee ayey u muuqan doontaa shaxda Manchester United haddii lagu daro Kalidou Koulibaly?
January 16, 2020 95
(Manchester) 16 Jan 2020. Manchester United ayaa muddo dheer lala xiriirinayay inay u dhaqaaqdo daafaca kooxda Napoli ee Kalidou Koulibaly, sidoo kale waxa ay kooxda ku raad joogtaa dhowr xiddig oo ay kusoo xoojin karaan safkooxda suuq yadda bilaha janaayo iyo june
Mancehester United ayaa waxay diyaar u tahay inay bixiso lacag dhan 64 milyan ginni si ay u helaan adeega xiddiga ku wanaagsan ka ciyaarista daafaca dhexe suuqa xagaaga.
In kasta oo wax badan ay iska beddeli karaan sida hadda la qorsheynayo inta lagu gudajiro qeybta labaad ee xilli ciyaareedka, taageerayaal badan oo United ah ayaa u arka in saxiixa difaacan ay wax badan kooxda u baahi qabto .
Imaatinka Koulibaly ayaa sidoo kale sahlaysa culeyska saaran Victor Lindelof iyo Harry Maguire, kuwaasoo inta badan xilli ciyaareedkan ku qaatay labada boos ee khadka dhexe ee difaaaca kooxdan taariikhiga ah.
Si kastaba ha noqotee macalin Ole Gunnar Solskjaer ayaa haatan helaya fursad uu ku noqdo mid waxbadan kusoo kordhin kara qeybta daafaca ee kooxda hadii uu ku guuleeysto in 28 jirkan uu kasoo dajiyo garoonka Old Trafford.
Hadaba warsidaha “Mole Sports” ayaa sadaaliyay sida ay noqon doono shaxda Manchester United haddii ay awoodaan inay lasoo wareegaan Koulibaly.
Ethiopia Plans to Build Africa’s Largest Airport at $5 Billion – Bloomberg
Ethiopia: Consultant – Migration Data
Goorma ayuu Alexandre Lacazette dib ugu soo laabanayaa tababarka kooxdiisa Arsenal?
Xiriirka FA-ga Ingiriiska oo go’aan ka soo saaray kulanka Final-ka FA Cup-ka ee ay ku ballansan yihiin Kooxaha Arsenal iyo Chelsea
RASMI: Xilliga la ciyaari doono tartanka EURO 2020, kaasoo loo bedelay sanadka 2021-ka oo shaaca laga qaaday